အနုပညာလောက အကြီးအကျယ် အရှက်ရစေတဲ့နေ့ -
“ထာဝရနှောင်ကြိုး” ရုပ် ရှင် ဇာတ်ကားကြီး သည် ရုပ်ရှင်ချစ်ပြည်သူအများ၏ အားပေးချီးမြှောက်မှုကြောင့် ရုံတင်ဝင်ငွေ သိန်းပေါင်း ၂ သောင်း ၄ ထောင် ရရှိခဲ့
ခီဇနီးမောင်နှံက သူတို့ဇာတ်ကားကနေရရှိတဲ့ ၀င်ငွေကို တရားဝင်ကြေငြာသွားတယ်။ အံ့အားသင့်စရာကတော့ နိုင်ငံတော်ကို အခွန်သိန်း ၁၈၀၀ ကျော်ပေးဆောင်မယ်တဲ့။
ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ ရိုက်ကူးတဲ့ “ထာဝရနှောင်ကြိုး” ရုပ် ရှင် ဇာတ်ကားကြီး သည် ရုပ်ရှင်ချစ်ပြည်သူအများ၏ အားပေးချီးမြှောက်မှုကြောင့် ရုံတင်ဝင်ငွေ သိန်းပေါင်း ၂ သောင်း ၄ ထောင် ရရှိခဲ့တယ် လို့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ ကိုယ်တိုင် Fan Meeting မှာ တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့တော့ ပြန်စဉ်းစားမိတာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ တုန်းက ကျုပ်တို့မြန်မာအနုပညာရှင်တွေရဲ့ အခွန်ဆောင်ခဲ့မှုတွေပါ . . .
တစ်နှစ်လုံးအတွက် သိန်း ၂၀ အထက်ဆောင်တာက အနုပညာလောက တစ်ခုလုံး(ရုပ်ရှင်ဂီတပေါင်း) မှ ၄ ဦးပဲရှိတယ်။ ၁၀ သိန်းအထက်ဆောင်တာက ၂ ဦးပဲရှိတယ် …။ ၁ သိန်းအောက် ၃ ဦးအပါအ၀င် စုစုပေါင်း အခွန်ဆောင်တာ ၁၆ ဦးပဲရှိတယ် …။ကျန်တဲ့သူတွေက လုံးလုံးကိုမဆောင်လို့ ဆောင်ပေးကြပါ တောင်းယူရတဲ့အဖြစ် ပါ …။
၅ ရက်လောက်ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားက ထုတ်လုပ်သူက သိန်းသောင်းချီမြတ်တယ် ။ ဒါရိုက်တာနဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား မင်းသမီးတွေက ထိုင်ထလုပ်ယုံနဲ့ သိန်းရာချီ ထောင်ချီရကြတယ် ။ နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေ တီးဝိုင်းတွေ တစ်ပွဲ သိန်းထောင်ချီဝင်ကြတယ် …။
ဒါပေမယ့် သူတို့တစ်သက်လုံးအခွန်ဆောင်လာတာက မနေ့တနေ့ကမှ ရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်လာတဲ့ ခီဇနီးမောင်နှံရဲ့ အစွန်းထွက်တောင်မရှိဘူး . . .။ အခွန်ရှောင်ကြလို့ ရုပ်ရှင်လောကတိုးတက်လား ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ တိုးတက်လားဆိုတော့ အရံတွေဘ၀က သူတောင်းစားသာသာဖြစ်နေကြရတဲ့ ဘဝတွေ ပေါကား အခြောက်ကား ဟာသကားတွေရိုက်ပြီး ပြည်သူကို ဂျင်းထည့် အခွန်ရှောင်ကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ရှက်ကြစမ်းဗျာ …။
အနုပညာလောကထဲမှာ ခုလို ဘယ်လောက်ရတယ် ဘယ်လိုအခွန်ဆောင်တယ် ဘယ်သူပြောရဲကြလဲ …? ကျုပ်ကတော့ ခီဇနီးမောင်နှံရဲ့ ယခုလုပ်ရပ်ကိုတော့ တကယ်လေးစားသွားပြီ ကျုပ်တို့အားလုံးလေးစား အတုယူကြရမယ်ဗျ …။ သူတို့ဇာတ်ကားထွက်တိုင်း ၀န်ထမ်းတွေကိုလိုက်ပြတယ်။ နောက်ထွက်သမျှလည်း အားပေးမယ် …။
လမ်းကြောင်းမှန်စွာ မယိုင်မလဲလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေဗျာ . . .
အနုပညာလောက အကွီးအကယျြ အရှကျရစတေဲ့နေ့
“ထာဝရနှောငျကွိုး” ရုပျ ရှငျ ဇာတျကားကွီး သညျ ရုပျရှငျခဈြပွညျသူအမြား၏ အားပေးခြီးမွှောကျမှုကွောငျ့ ရုံတငျဝငျငှေ သိနျးပေါငျး ၂ သောငျး ၄ ထောငျ ရရှိခဲ့
ခီဇနီးမောငျနှံက သူတို့ဇာတျကားကနရေရှိတဲ့ ဝငျငှကေို တရားဝငျကွငွောသှားတယျ။ အံ့အားသငျ့စရာကတော့ နိုငျငံတျောကို အခှနျသိနျး ၁၈၀၀ ကြျောပေးဆောငျမယျတဲ့။
ဒါရိုကျတာ ခရစ်စတီးနားခီ ရိုကျကူးတဲ့ “ထာဝရနှောငျကွိုး” ရုပျ ရှငျ ဇာတျကားကွီး သညျ ရုပျရှငျခဈြပွညျသူအမြား၏ အားပေးခြီးမွှောကျမှုကွောငျ့ ရုံတငျဝငျငှေ သိနျးပေါငျး ၂ သောငျး ၄ ထောငျ ရရှိခဲ့တယျ လို့ ဒါရိုကျတာ ခရစ်စတီးနားခီ ကိုယျတိုငျ Fan Meeting မှာ တရားဝငျ ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အဲ့တော့ ပွနျစဉျးစားမိတာက လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ တုနျးက ကြုပျတို့မွနျမာအနုပညာရှငျတှရေဲ့ အခှနျဆောငျခဲ့မှုတှပေါ . . .
တဈနှဈလုံးအတှကျ သိနျး ၂၀ အထကျဆောငျတာက အနုပညာလောက တဈခုလုံး(ရုပျရှငျဂီတပေါငျး) မှ ၄ ဦးပဲရှိတယျ။ ၁၀ သိနျးအထကျဆောငျတာက ၂ ဦးပဲရှိတယျ …။ ၁ သိနျးအောကျ ၃ ဦးအပါအဝငျ စုစုပေါငျး အခှနျဆောငျတာ ၁၆ ဦးပဲရှိတယျ …။ကနျြတဲ့သူတှကေ လုံးလုံးကိုမဆောငျလို့ ဆောငျပေးကွပါ တောငျးယူရတဲ့အဖွဈ ပါ …။
၅ ရကျလောကျရိုကျတဲ့ ရုပျရှငျကားတဈကားက ထုတျလုပျသူက သိနျးသောငျးခြီမွတျတယျ ။ ဒါရိုကျတာနဲ့ သရုပျဆောငျမငျးသား မငျးသမီးတှကေ ထိုငျထလုပျယုံနဲ့ သိနျးရာခြီ ထောငျခြီရကွတယျ ။ နာမညျကွီး အဆိုတျောတှေ တီးဝိုငျးတှေ တဈပှဲ သိနျးထောငျခြီဝငျကွတယျ …။
ဒါပမေယျ့ သူတို့တဈသကျလုံးအခှနျဆောငျလာတာက မနတေ့နကေ့မှ ရုပျရှငျလောကထဲဝငျလာတဲ့ ခီဇနီးမောငျနှံရဲ့ အစှနျးထှကျတောငျမရှိဘူး . . .။ အခှနျရှောငျကွလို့ ရုပျရှငျလောကတိုးတကျလား ရုပျရှငျလောကသားတှေ တိုးတကျလားဆိုတော့ အရံတှဘေဝက သူတောငျးစားသာသာဖွဈနကွေရတဲ့ ဘဝတှေ ပေါကား အခွောကျကား ဟာသကားတှရေိုကျပွီး ပွညျသူကို ဂငျြးထညျ့ အခှနျရှောငျကွတဲ့ အနုပညာရှငျတှေ ရှကျကွစမျးဗြာ …။
အနုပညာလောကထဲမှာ ခုလို ဘယျလောကျရတယျ ဘယျလိုအခှနျဆောငျတယျ ဘယျသူပွောရဲကွလဲ …? ကြုပျကတော့ ခီဇနီးမောငျနှံရဲ့ ယခုလုပျရပျကိုတော့ တကယျလေးစားသှားပွီ ကြုပျတို့အားလုံးလေးစား အတုယူကွရမယျဗြ …။ သူတို့ဇာတျကားထှကျတိုငျး ဝနျထမျးတှကေိုလိုကျပွတယျ။ နောကျထှကျသမြှလညျး အားပေးမယျ …။
လမျးကွောငျးမှနျစှာ မယိုငျမလဲလြှောကျလှမျးနိုငျပါစဗြော . . .